photoshop | YoeYar CG Blog | Page 2
Myanmar IT Technician
ဒီကာတွန်းကို ၂ဝဝ၉ ဖေဖော်ဝါရီထုတ် အဖြူရောင်သံစဉ် မဂ္ဂဇင်းအတွက် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ တောင်းဆိုမှုနဲ့ ဆွဲတယ်။
This comic was drawn for 2009 February APYTZ Magazine.
လိုင်းကို လက်နဲ့ပဲ ဆွဲတယ်။ Scan ဖတ်ပြီး Photoshop မှာ Threshold ပေးလိုက်တယ်။ Brush ကြီးကြီးတစ်ခုနဲ့ Shade တွေ လိုက်ဖြည့်လိုက်တယ်။ စာဘောလုံးတွေအတွက် Open Office Writer မှာ ဆွဲပြီး Photoshop ထဲကို Paste လုပ်တယ်။ ဒါတွေအားလုံးကို တစ်ထိုင်တည်း လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။
All lines were drawn by hand. First, I scanned and threshold the image in Photoshop. Then, I usedabig airbrush for shading. I simply generated word balloons in Openoffice, copy and paste into Photoshop. All were done in one place.
Tomo Izakaya at Clarke Quay
တိုမို ဂျပန်စားသောက်ဆိုင်ရဲ့ အပြင်ဘက်။ နေရာက Clarke Quay ။ ရိုက်ထားတဲ့ပုံက လိုက်တင်မရှိ ကာလာမကောင်း မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ။
Tomo Plain Photo
Camera Match လုပ်ဖို့ အတိုင်းအတာလည်းမပါ။ Mark Point တွေလည်းရေးမထား။ ဒီဓာတ်ပုံနဲ့ Autocad Plan ပဲရှိတော့ ကြိုးစားပြီး Camera Match လုပ်လိုက်တယ်။
Tomo Outside Plan
Tomo Outside 3D
Photoshop ထဲမှာ ကစားလိုက်တော့ သိပ်မဆိုးတဲ့ ရလဒ်ထွက်လာတယ်။
ဒါတွေက တခြား Angle ညအချိန်။
Tomo Outside Night
Modeling Stones was pain in the ass. ဝါးလုံးတွေ ကြိုးချည်ထားတာလည်း ဝါးနဲ့ ကြိုး Texture ရှာမရလို့ တော်တော် လုပ်ယူလိုက်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ရအောင်ဆွဲနိုင်ခဲ့တယ်။
ဒီဆိုင်နဲ့ ဒီဇိုင်နာက Asia Pacific Property Awards 2009 ရသွားတယ်။ :D
Vivace: Herritage Bathroom Interior Perspective
Vivace ရဲ့ Herritage Bathroom Interior Design က ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး ပုံတွေထဲက တစ်ပုံ။
တကယ်ဆောက်တော့ ဒီဇိုင်းက အမျိုးစုံ ထပ်ပြောင်းသေးတယ်။ ထားတော့။ ဒီရေချိုးခန်းကိုကြည့်ရင်းနဲ့ ကြွယ်ဝမှု၊ တည်ငြိမ်မှုကို ခံစားရတယ်လို့ ထင်မိတယ်။ နောက်ဒီဇိုင်းတွေအတွက် ထပ်ပြင်တော့ သိပ်ခံစားလို့ မရတော့ဘူး။
Vivace Bath 3D
Scene က အသေးစိတ်ပေမယ့် သိပ်မလေးဘူး။ ဒီပုံမှာ 3D Render က ပုံမှန်ပဲ။ Render time 30 min လောက်ပဲ ရှိတယ်။ Photoshop Retouching ကိုတော့ စိတ်ကြိုက် အချိန်ယူပြီး လုပ်ခဲ့တယ်။
ဒါက Final Output … ဘယ်လိုလဲ… ဗိုက်နာသလိုလို ရေချိုးချင်သလိုလို ဖြစ်သွားပြီလား။ :)
ရန်ကုန်ရဲ့ တစ်ရက်မှာ ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ မီးလာတုန်း ဒီပုံကို ဆွဲလိုက်တယ်။ လိုင်းတွေကို Toonboom မှာ ဆွဲတယ်။ အရောင်ကို Photoshop မှာ ဖြည့်တယ်။ ခပ်သွက်သွက်ခံစားမှုရအောင် နောက်ခံအဖြစ် အရောင်တွေ အများကြီးပါတဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ခုကို Motion Blur ပေးလိုက်တယ်။
သူ့နာမည်က စစ်သားလေးဒိတ်ဒိတ်ကြဲ။ ဘယ်တော့မှကျည်မကုန်တဲ့ သေနတ် နှစ်လက်ကို ကိုင်တယ်။ တစ်ကိုယ်တော်လူစွမ်းကောင်းဝါဒီဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ကိုစိတ်တိုအောင် သွားလုပ်ရင် ဘယ်သူ့ကိုမဆို မသေမချင်း သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်လိမ့်မယ်။
ဇာတ်ကောင်နာမည် – by El Dorado Digital Media
ဇာတ်ကောင် ဒီဇိုင်း – by Lionslayer